Isku Xidhka Qaybta Xayeysiinta Dhaqanka-Dijitaalka ah | Martech Zone
Isku-xidhka Qaybta Xayeysiinta Dhaqanka-Dijitaalka ah
Thursday, April 14, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Danielle Ciappara
Caadooyinka isticmaalka warbaahinta ayaa si weyn isu beddelay shantii sano ee la soo dhaafay, iyo ololayaasha xayeysiinta ayaa isbedelaya si ay u socdaan xawaaraha. Maanta, doolarka xayeysiinta ah ayaa dib loogu qoondeeyay kanaallada qadka ka baxsan sida TV-ga, daabacaadda, iyo raadiyaha oo loo beddelay dijital iyo iibsiga xayeysiiska barnaamijka. Si kastaba ha noqotee, noocyo badan ayaan hubin dib-u-dejinta hababka la isku dayay-iyo-run ee qorshayaashooda warbaahineed ee dijitaalka ah.
TV-ga ayaa la filayaa inuu wali xisaabiyo in ka badan saddex-meelood meel (34.7%) isticmaalka warbaahinta adduunka marka la gaaro sanadka 2017, in kasta oo waqtiga ku qaatay daawashada barnaamijyada baahinta ee telefishanka la filayo inuu hoos u dhaco 1.7% sanadkiiba. Taa bedelkeeda, waqtiga lagu qaatay gelitaanka internetka ayaa la saadaalinayaa inuu koro 9.4% sanadkiiba inta udhaxeysa 2014 iyo 2017.
Xayeysiisyada TV-ga, xitaa iyadoo laga boodayo DVR iyo hoos u dhaca daawadayaasha, wali waxay gaarsiisaa gaadhista iyo wacyiga ugu xoogan. Suuqgeeye ahaan halka uu telefishanku wali yahay kan ugu awoodda badan (laakiin aan muddo dheer ahayn), way fududahay in la fahmo diidmada tijaabinta ololaha cusub iyo walxaha suuqgeynta iyadoo loo marayo dhijitaalka. Isbeddelka ku yimid isticmaalka warbaahinta ayaa gabi ahaanba bedelay sida xayeysiiyayaashu u cabirayaan waxa ku jira iyo waxtarka jawaabta isla markaana kala guurka ayaa durba la dhacaya xayeysiiyaasha sumadda.
Marka laga eego aragtida jawaabta, boorarka, horudhaca liiska, qaadashada bogga, iyo bartilmaameedka aaladda iskutallaabta ayaa sidoo kale ah taatiko suuq wax ku ool ah oo la cabbiri karo. Suuqyayaashu waxay ogyihiin in xogta qeybta koowaad loo isticmaali karo in lagu bartilmaameedsado isticmaaleyaasha isla marka ay suuqa ku jiraan si loogu beddelo. Natiijo ahaan, suuqleyda waa inay miisaamaan jaangooyada ololaha inta udhaxeysa calaamadda, soo noqnoqoshada, wacyi gelinta, iyo jawaab celinta. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la soo bandhigo xaqiiqooyinka sida dijitaalku u saameyn ku yeelan karo waxqabadka ololaha ee lagu tilmaami karo qiimeyn la xiriirta gaarsiinta wacyiga TV-ga.
Waa muhiim in la sharaxo sababta cabbiraadda ololayaasha marka la eego heerarka gujinaya-iyo qiimaha-ku-helidda waxay keeneysaa qiime kaabaya gaadhista iyo soo-noqoshada TV-ga Suuqgeeyuhu waa inuu fahmaa haddii dadka ay gujinayaan xayeysiiskaaga, taasi micnaheedu waa inay xiiseynayaan — laakiin waxay u baahan yihiin inay intaas ka sii dheeraadaan si ay u fahmaan sababta ay ugu baahan yihiin inay diiradooda uga weeciyaan cabbiraadaha ololaha dhaqameed ayna aqoonsadaan in dijitaalka lagu dari karo istaraatiijiyada suuq geynta iyo ujeedooyinka ololaha iyo waxtarka.
La Socodka Safarka Macaamiisha
In kasta oo ololeyaasha dhijitaalka ahi ay leeyihiin astaamo ka sii xoog badan sababta oo ah awoodda loola socdo macaamiisha safaradooda wacyigelinta illaa beddelaadda, gaar ahaan e-commerce, waxtarkeeda waa in lagu dhex daro wacyigelinta TV-ga, oo aan la kala saarin. Gawaarida-u-tafaariiqda, tani way yara khiyaanayn kartaa, laakiin horumarinta iyo korsashada tiknoolajiyada beecon ayaa sidoo kale soo koobaya farqigaas. Tan iyo markii ololeyaasha dijitaalka ah ay bartilmaameedsadaan isticmaaleyaasha maaddaama ay suuqa ku jiraan, uma baahnid in aad farriin si isdaba joog ah u qarxiso si aad u bartilmaameedsato macaamiisha horeyba u lahaa wacyiga sumadda.
Marka ay timaado dijitaalka, isku dheelitirka tayada iyo tirada. Hubinta in suuqleyda iyo wakaaladooda ay si buuxda u fahmaan caqabadaha, xalalka iyo cabbiraadda wax ku oolka ah ee la isugu geeyo dijitaalka iyo TV-ga waa mid aad muhiim u ah, sidoo kale waa qiimeynta mid waliba uu ku leeyahay guusha ololaha. Waxaa jira habab aad u kala duwan oo lagu cabbiro jaangooyooyin olole iyo in la qaato luqadda cusub ee mid walba waa tallaabada ugu horreysa.
Ka fikirida wixii lamid ah tirooyinka iyo dib uqiyaasida waxyaabaha sababaha guusha u horseeda ROI togan ayaa fure ah. Haddii adeegsiga warbaahinteenna dib loo qiimeeyay oo dib looga shaqeeyay waaberigii dijitaalka, markaa sida aan u aragno guusha iyo kala qaybsanaanta ka dhexeysa barnaamijyada warbaahinta ee caadiga ah iyo dijitaalka ayaa u baahan isbadal sidoo kale.
Tags: marketing digitalbaabuur-tafaariiqisticmaalka warbaahintatelevisionxayaysiis dhaqameed
Danielle Ciappara Thursday, April 14, 2016 Saturday, February 13, 2021
Danielle Ciappara waa Isuduwaha Warbaahinta Digital ee Hawthorne Toosan, oo ah hay'ad xayeysiis tiknoolajiyad hoggaamineed oo ku takhasusay falanqaynta iyo ololeyaal sumcad lagula xisaabtami karo in ka badan 30 sano. Wuxuu ka soo jeedaa San Francisco, Danielle waa ku faanaa Cal iyo USC grad. Waxay qortay shahaadada masters-ka oo ku saabsan isbeddelada gudaha iyo dibedda ee dhaqanka ganacsiga sababo la xiriira kororka dhijitaalka iyo transmedia.
3 Talooyin Suuq-geynta Dijital ah ee Gaarka ah ee Warshadaha
Maxaan Ka Baranay La Wareegista Macaamiisha Adoo Ku Lulay Xeyrarka